परदेश खबर – paradeskhabar.com
रियाद।साउदी अरबले आवासीय र श्रम कानुन तथा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्ने झण्डै १६ हजार व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरेको छ। राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा एक हप्ता लामो निरीक्षणको दौरान १५ हजार ९ सय उल्लंघनकारी गिरफ्तार भएका हुन्। १२–१८ अगस्टसम्म सुरक्षाबलका विभिन्न इकाइ र पासपोर्ट महानिर्देशनालयद्वारा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरिएको निरीक्षण अभियानमा उनीहरुलाई गिरफ्तार गरिएको हो। गिरफ्तार परेकामध्ये आवासीय कानुनको उल्लंघन गर्ने ५ हजार ४ सय ३६, सीमासुरक्षा नियमको उल्लंघन गर्ने करिब ९ हजार ७५ र श्रम कानूनको उल्लंघन गर्ने १ हजार ३ सय ८९ भन्दा बढी रहेको बताइएको छ। अन्य देशबाट आफ्नो राज्यमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरिरहेका कूल ४ सय ५४ जना पक्राउ परेको बताइएको छ । जसमध्ये ४५ प्रतिशत यमनी , ५१ प्रतिशत इथियोपियाली र ४ प्रतिशत अन्य राष्ट्रका नागरिक भएको स्थानीय पत्रिकाले बताएको छ। त्यस्तै, २३ व्यक्
अफगानिस्तानमा कार्यरत नेपालीहरूको उद्धारकार्यका लागि विदेशीहरूले चासो देखाएका छन् । अधिकांश नेपालीहरू ग्रिन जोनमा सुरक्षाकर्मीका रूपमा कार्यरत भएकाले अन्य कर्मचारीको उद्धार भइसकेपछि आफ्नो पालो आउन सक्ने उनीहरूको अपेक्षा छ । ‘हामीले अन्तिमसम्म ड्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अफगानिस्तानस्थित जर्मनी नियोगमा कार्यरत एक नेपालीले नाम नछाप्ने शर्तमा भने, ‘अरूको उद्धारपछि हाम्रो पालो आउँछ होला ।’ ती व्यक्तिका अनुसार विदेशीहरूको उद्धार कार्य जारी छ । ‘पाँच मिनेटमै विमानस्थल पुग्न सकिने ठाउँमा पनि हेलिकोप्टर चाटर्ड गरेर नागरिकहरूलाई लैजाने काम भएको छ,’ उनले भने । नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले अफगानिस्तान मामिला हेर्ने गर्छ । दूतावासले पनि नेपालीहरूको सुरक्षित उद्धारका लागि काबुलमा रहेका कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको छ । भारतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख (डीसीएम) रामप्
फेरी मलेसियामा एक नेपालीको मृत्यु !! हार्दिक श्रद्दान्जली दिनेश खड्का खप्तडि/ क्वालालम्पुर, २४ श्रावन २०७८, आइतबार !! रोजगारीको लागि मलेसिया आएका एक नेपालीको मृत्यु भएको छ । सिरहा जिल्ला धनगढीमाई नगरपालिका वडा न १२ गडमे घर भएका ३८ बर्षिय खिल बहादुर शाहीको मृत्यु भएको हो। डमरु रिसोर्स प्राली मार्फत रोजगारीका लागि आएका शाहि अल्फा फोर्स सेक्युरिटि कम्पनीमा विगत साढे तीन वर्ष देखि कार्यरत रहेका थिए । पछिल्लो समयमा उनी सेलाङ्गरको साहआलम सेक्सन २ मा सेक्युरिटिगार्डको रुपमा कार्यरत थिए । शाहिमा दुई दिन अगाडि देखि रुघाखोकि र ज्वरोको लक्षण देखिएको थियो । आफना सहकर्मि साथीहरुलाई कोरोना पोजेटिभ आएर क्वारेन्टाईनमा वसेको भएपनि उनले कोरोना परीक्षण गर्न नमानेको उनी सगै काम गर्ने साथीहरुले वताएका छन । कोठामै वसिरहेको अवस्थामा शुक्रवार दिउसो उनको मृत्यु भएको हो । शाहीको परिवारमा श्रीमती र तीनवट
काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार विभागले गत आर्थिक वर्ष२०७७/७८मा ११६ देशमा काम गर्न जानको लागि नेपाली कामदारलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको छ। विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिनेमा सबैभन्दा बढी कतार जानको लागि५४हजार९१५जना रहेका छन्। यस्तै साउदी अरब जान४६हजार९६०,युनाइटेड अरब इमिरेट्स जान ४०हजार४७७,बहराइनमा४हजार९४०,ओमान जान ३हजार१३३ र जापान जान२हजार७९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। गत वर्ष कूल १लाख६६हजार६९८ जनाले श्रम स्वीकृति पाएका थिए। महामारीमा पनि नेपालीको विदेश लर्को-२८ हजारले लिए अध्ययन अनुमति, ५७ हजारले लिए नयाँ श्रम स्वीकृति काठमाडौँ – पछिल्लो एक वर्षमा २८ हजारभन्दा बढिले विदेशमा अध्ययनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति (एनओसी) लिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २७ हजार ९ सय ७८ जनाले एनओसी लिएका छन्। जापानका लागि ८ हजार एक सय ४६, अस्ट्रेलियाका लागि ४ हज
नेपालदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकको लागि हुँदै आएको चार्टर्ड उडान बन्द हुने भएको छ । चार्टर्ड उडानमा विदेश जाने यात्रुहरुसँग धेरै भाडा लिएको उजुरी पर्न थालेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चार्टर्ड उडान बन्द गरेर नियमित उडान खुलाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘विभिन्‍न मुलुक गएका यात्रुले हामीलाई विभिन्‍न माध्यमबाट गुनासो गरेपछि चार्टर्ड बन्द गरेका हौँ मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी भन्छन्,’ मन्त्रालयको नीतिमा चार्टर्ड उडान प्राथमिकता छैन ।’ विदेश जान टिकट खरिद गर्दा ट्राभल एजेन्सीले तोकेको भाडादरभन्दा बढी लिएमा नाम तोकेर प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन सक्ने अधिकारीले बताए । यात्रु बोक्ने गरी चार्टर्ड नभएको र स्वास्थ्य सामग्री बोक्नका लागि मात्र चार्टर्ड उडान अनुमति दिएको उन उनको भनाइ छ। आगामी सातादेखि थप तीन मुलुकका लागि नियमित उडान सुचारु हुने मन्त
काठमाण्डौ, नेपाल सरकारले कतार लगायत टर्की र चीनको लागि भनेर जुन ७ देखि नियमित उडान सञ्चालन गर्‍याे । लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान रोकिएकाहरु उत्साहित भए । कतार, टर्की लगायत यी देशमा ट्रान्जिट भएर अन्य गन्तव्य देश जान पर्खिरहेका नेपाली श्रमिकमा खुसी छायो । हप्तामा दुई वटा मात्रै हुने भए पनि नियमित उडान भनेपछि पहिलेकै भाडादरमा जान पाइने भो भनेर ढुक्क भए । तर जब नियमित भनिएको उडानको लाखौं रुपैयाँ भाडादर सुने तब छाँगाबाट खसेझैंँ भए । कतार जानको लागि महिनादिन देखि पर्खेर बस्नुभएका धनुषाका जीवन साहलाई पनि यस्तै भयो । कतार जाने भनेर दुई महिनादेखि काठमाण्डौमा साथीको कोठामा बस्दै आउनुभएका उहाँ नियमित उडान खुले पनि जान पाउनुभएको छैन । आफूले पहिलेकै भाडादरमा जान भनेर पैसाको जोहो गरेको तर अहिले भाडादर महंगो भएका कारण आफू जान नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘एअरलाइन्समा बुझेको, एक लाख बीस हजार
Posted in अन्तर्राष्ट्रिय, परदेश खबर
क्वालालम्पुर : अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा मलेसियामा ३५ नेपालीको श’व अ’ड्किएको छ ।सरकारले को’रोना स’ङ्क्रमण रोक’थामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान ब’न्द गरेको एक महिनाको अव’धिमा मलेसियामा मात्रै लगभग ३५ नेपालीको श’व रोकिएको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार घर करार, भिसा सकाएर नेपाल फर्कन खोज्ने नेपालीको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । नेपालले उडान ब’न्द गरेपछि करार सकिएर घर फर्कन खोज्नेहरू मात्रै लगभग एक हजार जना रहेको राजदूत पाण्डेले बताउनुभयो ।मलेसियामा विभिन्न कारणले जे’ल परेका र जेलको समयावधि सकेर ६५ जना नेपाली घर फर्कने दिन कुरिरहेका छन् । मलेसियामा गएको वर्षजस्तो रोजगारी गु’मेर अ’लपत्र पर्ने अवस्था अहिले छैन । क’रार सकिएर घर फर्कने तयारीमा रहेकाहरूलाई कम्पनीले नै खान र बस्ने व्यवस्था गरिरहेको छ । ‘पनि पछिल्लो समय को’रोना सङ्क्रमण बढ्
काठमाण्डाै – मे/जुनको गर्मीले भतक्कै पोल्छ खाडीमा । त्यसैमाथि कामविहीन भएर महिनौंसम्म कोठाभित्रै बस्दाको छटपटी । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएसँगै स्वदेश फर्किन नपाएपछिको बेचैनी । अनि त्यही बेचैनीले गर्दा दिमागभरि मडारिन्छ निराशाको बादल । ‘अब त यहीँ मरिएला कि जस्तो छ’, उज्यालोको फेसबुक पेजमा यूएईबाट सन्तोेष सुनार लेख्नुहुन्छ, ‘करार अवधि सकियो, काम छैन, कम्पनीले कोठा छाडेर निस्क भनिसक्यो । एक महिना त जसो तसो बाँचियो अब कसरी बाँच्ने सरकार ?’ सन्तोषसँगै उहाँका अरु साथीहरु पनि यही समस्या झेलिरहेका छन् । उडान खुल्लान् वा सरकारले उद्धार गर्ला भन्ने आशा पालेर बसेका छन् । तर न उडान खुल्ने खबर सुनिन्छ न त उद्धार गर्ने । ‘परदेशीको पक्षमा नेताले बोलेको समाचार नै सुनिदैन, हाम्रो सरकार कहाँ हरायो’, सन्तोष प्रश्न गर्नुहुन्छ । गएको वैशाख २३ गते मध्य रातिदेखि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान
काठमाडौं । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको प्रकोप बढ्दै गएपछि सरकारले गएको वैशाख २३ गतेदेखि लागु हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगायो । नियमित उडानमा प्रतिबन्ध लगाए पनि चार्टर्ड, उद्धार उडान गर्न भने दियो । यस्तै ‘एयर बबल’ सम्झौता अनुसार नेपाल र भारतको नयाँ दिल्ली सातामा एक-एक उडान भने जारी राख्यो । तर, अन्य गन्तव्यमा चार्टर्ड उडानको नाममा यात्रुसँग हवाई भाडा धेरै लिएको गुनासो आएको भन्दै सरकारले चीन, कतार र टर्कीका लागि सातामा एउटा उडान गर्न दिने निर्णय गर्‍याे । सरकारको उक्त निर्णयपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले टर्कीस एयरलाइन्स र कतार एयरलाइन्सका लागि सातामा एउटा उडान गर्ने अनुमतीसहितको तालिका सार्वजनिक गर्‍याे । चार्टर्ड उडानको नाममा बढी भाडा लिएको गुनासो आएपछि तीन मुलुकका लागि उडान अनुमती दिएपनि यिनै एयरलाइन्सले पनि निकै धेरै भाडा लिएको गुनासो यात्रुहरूले गरेका छन् ।
घुम्नका लागि दुबई जाने जो कोही बुर्ज खालिफा चढेर मात्र फ-र्कन्छन्। नभए, यो टावर-लाई पृष्ठ`भूमि पारेर फोटो खिचा-उन त प्राय: कसैले छोड्दै’नन्।विख्यात अमेरिकी आर्कि-टेक्ट एड्रिन स्मिथले लिली नामक पुतली-बाट प्रभा-वित भएर यसको डि;जाइन गरेका थिए। उक्त पुतली-को लय र संरचना बुर्ज खालिफा-सँग मिल्दो-जुल्दो भएको स्मिथले बताए:का छन्। युएईको दुबई-स्थित विश्वकै सबै-भन्दा अग्लो मानव निर्मित टावर बुर्ज खालिफा अहिले मध्य-पूर्वको व्यापा-रिक केन्द्र बनेको छ।बुर्ज खालि-फाको डिजाइन-अनुसार होटल, कार्या-लयदेखि अन्य व्यव;सायिक घराना त्यहाँ बसेका छन्। यो एउटा महत्व;पूर्ण व्यापा-रिक केन्द्र भएको छ।बुर्ज खालिफा बना`उँदा दिन र रात गरी दुई सिफ्टमा ९ हजार बढीले काम पाएका थिए। यी काम|दार मध्ये कयौं नेपाली पनि थिए। पोखरा`बाट ‘लेवर’ भिसामा दुबई पुगेका विनोद`कुमार विक पनि एक हुन्।एसएलसी फेल भएर उनी विदेश हानि`एका थिए